I-China L-Leucine CAS 61-90-5 yabenzi bePharma Grade (USP) nabaphakeli | Honray
IL-Leucine (Isifinyezo seLeu) ingenye yama-amino acid ayi-18, futhi ingenye yama-amino acid ayisishiyagalombili abalulekile emzimbeni womuntu. Ibizwa ngokuthi yi-branched chain amino acid (BCAA) ene-L-Isoleucine ne-L-Valine ndawonye ngoba zonke ziqukethe uchungechunge lwehlangothini lwe-methyl esakhiweni sazo samangqamuzana.
Njenge-amino acid ebalulekile, ingasetshenziswa njengesengezo sokudla okunempilo futhi isetshenziswa kakhulu kwimikhiqizo yesinkwa nesinkwa. Ingasetshenziswa futhi ekulungisweni kwesisombululo se-amino acid, ukwehlisa ushukela wegazi. Ngaphandle kwalokho, nayo ingasetshenziswa ukukhuthaza ukukhula kwezitshalo.
ILeucine ingasetshenziswa njengesengezo sokudla okunomsoco, isinongo kanye nokunambitheka. Ingasetshenziselwa ukulungiselela ukumpontshelwa kwe-amino acid kanye nomjovo we-amino acid, i-ejenti ye-hypoglycemic kanye ne-ejenti yokukhuthaza ukukhula kwezitshalo.
Imisebenzi yeLeucine ifaka ukusebenzisana ne-isoleucine ne-valine ukulungisa imisipha, ukulawula i-glucose yegazi nokunikeza umzimba amandla. Futhi kungathuthukisa ukuphuma kwe-hormone yokukhula, kusize ukushisa amafutha we-visceral; la mafutha angaphakathi komzimba futhi awakwazi ukudliwa ngempumelelo kuphela ngokudla nangokuzivocavoca umzimba.
ILeucine, isoleucine, ne-valine ngama-branched chain amino acid, alungele ukukhuthaza ukubuyiswa kwemisipha ngemuva kokuqeqeshwa. ILeucine yi-amino acid esebenza kahle kakhulu yegatsha engavimbela ukulahleka kwemisipha ngempumelelo ngoba ingaxazululwa ngokushesha futhi iguqulwe ibe yi-glucose. Ukungeza i-glucose kungavimbela ukulimala kwezicubu zemisipha, ngakho-ke ilingana kakhulu nomakhi womzimba. ILeucine ibuye ithuthukise ukuphulukiswa kwamathambo, isikhumba kanye nezicubu zemisipha ezonakele, ukuze odokotela bavame ukweluleka ngokufaka ibhekwa leucine ngemuva kokuhlinzwa.
Imithombo yokudla ehamba phambili ye-leucine ifaka irayisi elinsundu, ubhontshisi, inyama, amantongomane, isidlo se-soya, nezinhlamvu ezigcwele. Njengoba luhlobo lwe-amino acid ebalulekile, kusho ukuthi ayikwazi ukukhiqizwa ngabantu uqobo futhi ingatholwa kuphela ngokudla. Abantu ababamba iqhaza emisebenzini yomzimba enamandla futhi bathola ukudla okuphansi kwamaprotheni kufanele bacabangele ukwengeza i-leucine. Yize ingafaka ifomu lokuzimela elizimele, kuncanyelwa ukwengezwa ngokuhambisana ne-isoleucine ne-valine. Ngakho-ke isengezo sohlobo oluxubekile silula kakhulu.
Impuphu emhlophe yekristalu
Langaphambilini IGlycine CAS 56-40-6 ye-Pharma Ibanga (USP / EP / BP)
Olandelayo: I-L-Lysine HCL CAS 657-27-2 ye-Pharma Ibanga (USP)
I-Pharm Grade L-Leucine, Ukudla Kwezilwane, L-Threonine Pharm Ibanga, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Ibanga Lokudla, L-Valine 72-18-4,